Malunga nathi - Ningbo Imbaleki Co., Ltd.
Inkunkuma kunye noMgibe weVumba
I-Basket & Sink Strainers
Inkunkuma yeBhafu kunye nokuGcwala
Umsebenzi oKhanyayo weNkunkuma
Imijelo yamanzi kunye neeCloset zeCloset
Shower Itreyi yeNkunkuma
Fikelela kwiiMinyango kunye neepaneli
Ii GRDs zorhwebo
Izixhobo zeGRDs zorhwebo
Icala lodonga / loPhahla lweeGrDs
Iimpompo zokuSusa i condensate
Icala elisecaleni / Isilingi
IiGrilles eziBuyisiweyo eziNcedisiweyo
Izinto ezigqityiweyo kunye neNgxelo
Izixhobo kunye neziqhotyoshelweyo
Ukulungiselela imibhobho yamanzi
I-Ningbo Runner, esekwe ngo-2002, yinkampani encedisayo yeQela leMbaleki. Singomnye wabathengisi abakhokelayo beemveliso zekhaya, kwaye sizinikezele ekuboneleleni ngezona zisombululo zilungileyo kubathengi bethu. Namhlanje singumvelisi opheleleyo wokudibanisa uphando, uyilo kunye nemveliso, kwaye ibekwe embindini e-Ningbo ku-140,000 yeemitha zesikwere semveliso kunye nendawo yokugcina. Kuxhomekeke kuphando lwethu olomeleleyo lobuchwephesha kunye namandla okwenza imveliso asebenza kakuhle, kunye nolwalamano oluhambelanayo kunye nabathengi bethu, sizakhele udumo kwihlabathi liphela, kwaye iimveliso zethu zigubungele uMntla Melika, iYurophu, uMbindi Mpuma kunye noMzantsi Melika.
IIMPAHLA EZIXHOMEKEKEYO I-HVAC BATH EBHALA NGOMFUTSHANE Womoya
I-Ningbo Runner ineqela lobuchwephesha kunye neenjineli ezininzi ze-R & D ezibandakanyekayo kwicandelo lokuhlanjululwa kwezinto ezintsha, uyilo lweshishini, uyilo lwesikhunta, ulawulo oluzenzekelayo, uhlalutyo lovavanyo kunye nolawulo lweprojekthi, ukubonelela ngenkxaso enkulu kuzimvo oluzimeleyo lweWRN kunye nempumelelo yetekhnoloji.
Ukuthembela kwiqela layo elomeleleyo le-R & D kunye namava atyebileyo kuphuhliso lwemveliso kunye noyilo, imveliso yeNkampani kunye nolawulo lomgangatho unokuhlangabezana nabathengi kunye nokuthengisa ngcono.
Inkampani ikwinqanaba lokudityaniswa kunye nokukhuthazwa kokudibana kwemizi-mveliso kunye nolwazi. Iqhubele phambili kwimigca yemveliso yokuvelisa enjengokubumba okrelekrele, unyango oluhlaza komhlaba kunye nendibano ekrelekrele, kwaye ngokuthe ngcembe yaqonda ukudityaniswa kolwazi lwenkqubo yokwenza inkqubo yokuvelisa ye-MES, inkqubo ye-PLM kunye nenkqubo ye-ERP, kunye neziko elinamacala-ntathu elikhulu kakhulu ulungelelwaniso lwenkqubo yolawulo lwekhonkco lonikezo ukubonelela abathengi ngamalungelo abathengi azinzileyo kwaye asebenzayo kunye nemidla.
Ulwazi olukrelekrele lweSynergetic
Idilesi: Ummandla weLingang Industrial, iXizhou Idolophu, iXiangshan County, iSixeko saseNingbo, kwiphondo laseZhejiang, eChina
Umnxeba: +86 574 6584 8998
UMOYA OPHOLILE: Umnxeba